Author: ဗလာ Posted under: ဝတ္ထုတို, အက်ဆေး
အခန်းတစ်ခုလုံး လင်းထိန်နေအောင် မီးသီးဖြူဖြူတွေ အစီအရီထွန်းထားပြီး ခန်းမရဲ့အလယ်ဗဟိုတည့်တည့်မှာ စားပွဲခုံ အဖြူတစ်လုံး ထိုင်ခုံဆိုဖာ အဖြူတစ်ခုနဲ့ အင်္ကျီအဖြူ၊ ဘောင်းဘီအဖြူဝတ်ဆင်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ရပ်နေတယ် .. သူရဲ့ အသားရေကလည်း အဖြူ။ စားပွဲခုံပေါ်မှာ ပစ္စတိုတစ်လက်နဲ့ ကျည်ဆန်တစ်တောင့်။
ကင်မရာက လူငယ်ရဲ့ မျက်နှာစီကနေ တဖြည်းဖြည်းဝေးလာမယ်
ပြီးရင် အခန်း ပြီးရင် ထိုင်ခုံဆိုဖာ အဖြူ ပြီးရင် စားပွဲခုံ ပြီးရင် စားပွဲခုံပေါ်က ပစ္စတို။
လူငယ်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုလေးတစ်ခု အစပြုလိုက်မယ် .....
“ဒီအခင်းအကျင်းလောက်ဆိုရင် ပရိတ်သတ်တွေက မကြာခင်မှာ ဒီအခန်းထဲ အနီရောင်အစွန်းအကွက်တွေ
ဖြစ်လာတော့မယ် ဆိုတာ တွက်ပြီးသားဖြစ်လောက်ရောပေါ့”
“ဟုတ်တယ် ..... သူတို့ အဲဒါကို သေချာပေါက်ခန့်မှန်းမိမှာပဲ .... ဒါပေမယ့် သူတို့ မထင်မိတာက အဲဒီအဖြစ်အပျက် အပြီး ကြွက်ကလေးတစ်ကောင် အခန်းထဲက ထွက်ပြေးသွားမယ်ဆိုတာကိုပဲ ... ”
“အဲဒီ ကြွက်လေးက အမည်းရောင်”
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
နံနက် ၈း၀၀။ ။ ညက အိပ်ပျက်ထားတဲ့ အရှိန်နဲ့ ခေါင်းနဲနဲနောက်နေပေမယ့် သွားစရာရှိသေးတာမို့ အိပ်ရာက သူ ထဖြစ်တယ်။ အခန်းထောင့်နားမှာ ကြွက်ကလေးတစ်ကောင် ဖြတ်ပြေးသွားတာကို ရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရတယ်။ သိပ်မထူးဆန်းတဲ့ မြင်ကွင်းပဲ။ ဥပက္ခာပြုထားလိုက်။ မျက်နှာသစ် သွားတိုက် ရေချိုး အဝတ်အစားလဲ။ ဒါက လုပ်နေကျအလုပ်တွေမို့ သိပ်မထူးဆန်းဘူး။ ရေချိုးခန်းအဝင်ဝမှာ ကြွက်လေးတစ်ကောင်။ နောက်ပြီး ဗီရိုထဲမှာ။ ထားလိုက်ပါတော့ သွားစရာက ရှိသေးတယ်။
နံနက် ၉း၀၀ ။ ။ ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ကားဂိတ်ရောက်လာတယ်။ ကျောင်းထဲရောက်မယ့်ကားကို တတ်စီးတယ်။ ကားပေါ်မှာ ကြွက်ကလေးများ ပါလာသေးလားဆိုပြီး ရှာကြည့်နေမိတယ်။ သူ တော်တော်ရူးတာပဲလို့ ပြန်တွေးမိ။ ဒါပေမယ့် သူ့ထိုင်ခုံဘေးမှာ ကြွက်ကလေးပါလာတယ်။
နေ့ခင်း ၁၁း၀၀ ။ ။ Brake Time ဆိုတော့ ကန်တင်းမှာလည်း လူအပြည့်ပဲ။ ဒီနေ့တော့ အတန်း ၂ ချိန်စာ လွတ်သွားပြန်ပြီ။ ဒါလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်လေဆိုပြီး ကန်တင်းပဲ တန်းသွားလိုက်တယ်။ ဟော ... ကန်တင်းမှာလည်း ကြွက်ကလေး နေ့လည်စာစားနေတယ်။ သူက မနက်စာနဲ့ နေ့လည်စာ ပေါင်းစားတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကို မတွေ့တာကြာတဲ့ ပုံစံနဲ့ စကားတွေ တစ်လှေကြီး ပြောလိုက်တယ်။ လေခွန်မဆောင်ရသမျှတော့ လုပ်ချင်သလို လုပ်ပေါ့။ ဆောင်ရလည်း ကျောင်းသားပဲ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်နာရီကျော်ကြာပြီးတော့ စာသင်ခန်းသွားတော့ စာသင်ခန်းထဲမှာ ကြွက်လေးရောက်နေပြန်တယ်။ စာသင်တယ်။
ညနေ ၃း၀၀ ။ ။ ကျောင်းကနေ အိမ်ပြန်မယ်။ ကားဂိတ်မှာ ကြွက်ကလေးတစ်ကောင်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ရေမိုးချိုးပြီးတော့ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်သွားတယ်။ ကြွက်ကလေးက အဲဒီနားကဖြတ်သွားပုံရပါတယ်။ ရုတ်တရက် အမြင်လွှာမှာ လာကပ်ပြန်တယ်။ ခက်ပြီ တစ်နေကုန် ကြွက်နဲ့ကို မလွတ်သေးဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ထပ်ပြီး လေရိုက်တယ်။
ည ၉း၀၀ ။ ။ ကွန်ပြူတာရှေ့မှာ အချိန်ကုန်ဖို့ စတင်လှုပ်ရှားတယ်။ ပြောရရင် အိမ်ထဲရောက်နေပြီ။ ပိုပြီးတိကျရမယ်ဆိုရင်။ သူ့ အိပ်ခန်းထဲ သူပြန်ရောက်နေပြီလို့ ဆိုရမှာပေါ့။ ဟုတ်တယ်လေ ရောက်နေပြီပဲ။ ကဲကဲ ဆက်ပြောရအောင်။ ကွန်ပြူတာထဲမှာ ကြွက်ကလေး တစ်ကောင်။ ဟူးးးးး ...... ဒီကြွက်ကတော့ ရေစက်ပဲ ... သူတစ်ယောက် နဲ့ ကြွက်တစ်ကောင်နဲ့ ဇာတ်လမ်းပေါ့။ ဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးဗျ။ ခင်ဗျားဇာတ်လမ်းက ရုပ်လုံးမကြွဘူး။ ထားတော့ ... ။ အချိန်လင့်တော့မယ်။
နံနက် ၂း၀၀ ။ ။ ထုံးစံအတိုင်းပဲ သူ့အိပ်ချိန်က ဒီအချိန်ပေါ့။ ကြွက်ကလေးရေ အိပ်နေပြီလား။ ပြန်မထူးပုံထောက်ရင်တော့ အိပ်နေလောက်ပြီ။ အဲဒီကြွက်ကလေးက အိပ်မက်ထဲမှာ သူ့ လက်မောင်းပေါ်မှီအိပ်နေရဲ့။ ရပြီ ဒီလောက်ဆို သူ့ရဲ့ တစ်နေ့တာက ကြွက်နဲ့ နှစ်ပါးသွားနေရတာပဲ။ ပရိတ်သတ်ကလည်း ကြွက်ကလေးက အထီးလား အမလား သိလောက်ပြီပေါ့။ သြော် ..... တစ်ခုမေ့နေတာ .. ကျွန်တော်က ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ပါ။ သူက .. သူကလား ခင်ဗျားထင်သလိုပေါ့။ ဟုတ်ချင်မှလည်း ဟုတ်မှာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် သေချာပါတယ်။ အဖြူရောင် လူငယ်လေး နဲ့ အမည်းရောင် ကြွက်လေး။ မှားနေပြီဗျ။ အစကတည်းကမှားတာ။ ထားတော့ .... ။
ကျုပ်ရဲ့တစ်နေ့တာမှာ ကြွက်တစ်ကောင်ဟာ အမြင်အာရုံတိုင်းမှာ အသည်းအသန် တွယ်ကပ်နေတယ်။
နံနက် ၈း၀၀ ။ ။ ကျောင်းကားပေါ်မှာ သူမ တစ်ယောက်တည်း ထိုင်နေတယ်။ ရုတ်တရက် စိတ်ထဲထင်လာမိတာက တစ်ယောက်ယောက်သူမကို ကြည့်နေသလိုပဲ။ အင်း သူပဲနေမှာပေါ့။ သူက အဲသလိုပဲ။ သူမကို အမြင်လွှာထဲ နှစ်ထားချင်ပုံရတယ်။ မှန်တင်ခုံပေါ်မှာ ထိုင်နေကတည်းက သူက သူမ အနောက်ဘက် ရောက်ရောက်နေသလို ခံစားနေရတာ။ တကယ်တမ်း သူရောက်နေတာက သူမရဲ့ ..... ။
နံနက် ၉း၀၀ ။ ။ ကျောင်းရောက်တော့ အတန်းကို အသည်းအသန်ပြေးရတယ်။ ဒီနေ့ နောက်ကျလို့ မဖြစ်ဘူးလေ။ သူက သူမ နောက်က ထပ်ချပ်လိုက်နေသလိုပဲ။ မလွယ်ပါလား ကောင်လေးရယ်။ ကျွန်မက ရှင့်မျက်စိအောက်က ထွက်ကျလို့မရတဲ့ ဖုန်မှုန့်လား။ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်မက ရှင့်ရဲ့ အမြင်လွှာထက်က အရိပ်လေးလား။ ဟင့်အင်း ... တစ်ခုမှ မဟုတ်လောက်ဘူး။ ကျွန်မယူဆတာက ကျွန်မက ကြယ်တစ်ပွင့်လေ။ ရှင့်လက်နဲ့ မမှီတဲ့ကြယ်လား။ မှီတဲ့ကြယ်လား။ ကျွန်မ ရှင့်လက်မောင်းထက်မှာ တစ်မှေးလောက် အိပ်ချင်ပါသေးတယ်။
နေ့ခင်း ၁၀း၀၀ ။ ။ ကန်တင်းမှာ ဒီအချိန်ထိုင်ခုံကြပ်တယ်လေ။ အဲဒီတော့ သူမတစ်ယောက် အတန်းထဲမှာပဲ ထိုင်စားရတော့မှာပေါ့။ အင်း ... နေ့လည်စာအတွက် ကန်တင်းမှာ တစ်ခုခုသွားဝယ်ဦးမှာ။ ကန်တင်းမှာ စောင့်လိုက်ရတာလည်း ပြောမပြောချင်တော့ပါဘူး။ မပြောပါနဲ့တော့ဗျာ အချိန်ပုပ်တယ်။ နောက်တစ်ကဒ် ကူးရအောင်။ သူမ ကန်တင်းမှာ သူမ အတန်းထဲမှာ သူ့ မျက်လုံးအောက်ကတော့ ပျောက်မသွားဝံ့ဘူး။
ညနေ ၃း၀၀ ။ ။ စာစကားနဲ့ ပြောရရင်တော့ ပညာနို့ရည်သောက်သုံးပြီးတော့ အိမ်ပြန်ပြီပေါ့။ အမေ့နို့ရည် သောက်သုံးတဲ့ အရွယ်တော့ ကျော်သွားပြီ။ အမေ့ရဲ့ မေတ္တာရိပ်ကတော့ အေးတုန်းပါပဲ.. ။ ရှင်ရယ် .. ရှင့် အကြည့်တွေက ကျွန်မကို အတိတ်မေ့သွားစေတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အိမ်အပြန်လမ်းလေးကလည်း ပုံမှန်ပါပဲ။
ည ၉း၀၀ ။ ။ သူအိပ်နေပြီလား။ တစ်ယောက်တည်း နေတိုင်း သူ့ကို သတိရတယ်။ အမြဲတမ်းလည်း တစ်ယောက်တည်းပါပဲ။ သူ့မျက်လုံးတွေကတော့ ကျွန်မနားက တစ်ဖဝါးမှ မခွာခဲ့ဘူး။ သူမ မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားတုန်း အသံတစ်သံကြားလိုက်တယ်။ အိပ်နေပြီလားတဲ့။ သူပဲ နေမှာပါ ကျွန်မ သိတယ်။ အချိန်က
နံနက် ၂း၀၀ ။ ။ ဒီအချိန်ဆို ဒီအသံကိုကြားနေကျ တစ်ရေးနိုးနေကြ။ သူမ ပြုံးလိုက်ပျော်လိုက် မောလိုက် လွမ်းလိုက်။ ထားတော့ .. ဒါတွေက ကြာခဲ့ပါပြီ။ သူ့အမြင်လွှာတွေ သူမစီက စွန့်ခွာ ..... ။
သူ ဒီအချိန်လောက်ဆို အလွန်လင်းတဲ့ ဒါမှမဟုတ် မှောင်လွန်းတဲ့ နေရာကိုပဲကြည့်နေမှာ သေချာသလောက်ပဲ ဒါမှမဟုတ် ... ကျွန်မကိုပဲ တစ်ချိန်လုံး ဆက်ကြည့်နေဦးမှာလား။ သူ ကိုယ်တိုင် သူမပုံရိပ်တွေကို ဆက်မြင်ဖို့ အင်းအားမရှိတော့လို့ ခလုပ်မောင်းကို ဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာ ကြာပေါ့။ ကြွက်မလေးတစ်ကောင် သူ့နားက ပြေးထွက်သွားတယ်။ သူမရဲ့ တစ်နေရာရာမှာ သူခိုအောင်းနေရင်း သူမကို ကြည့်နေဦးမှာပေါ့။ ကျွန်မလည်း
သူ့အမြင်လွှာ နောက်ကို ထပ်ချပ်လိုက်ချင်လို့ ... ။
---------- ------------- ---------------- -------------- -------------- ----------------
- နေနှင်းစက် -
ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာ စကားလုံး တစ်ခုလို အသုံးပြုနေဖို့ထက် ရင်ဘတ်ထဲက ပါဖို့ အရေးကြီးတယ် ..... ဒီမှာ မိတ်ဆွေ ... ကျူပ် လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
Best Time To Call Experienced Emergency Electrician Jacksonville
ဘယ်တော့မှ ရှိမလာမယ့် အောင်မြင်ခြင်းမျိုးဆက်သို့
ပစ္စုပ္ပန်၏ တည့်တည့်အရပ်၌ ရှိသော
ခင်ဗျား မျက်လုံးထောင့်က မျက်ချေးတွေကို Recycle လုပ်ပစ်လိုက် - မင်းလုလင် ၊ ဆူးခက်မင်း -
"သောကြာနေ့ ၊မနက် ၉ နာရီ၊လက်ဖက်ရည်ဆိုင်"
ရင်ဝှက်ဂီတ ( မောင်မိုးမြင့် )
သို့ . . . လရိပ်ထင်
“ ဒီပုံပြင် ထဲကဇာတ်ကောင်ဟာ ဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ခ...
Copyright 2008 သတ်ပုံမရှိတဲ့ဗလာစာရွက်